NY SARY AMERIKANA MPIHETRAKETRAKA ALIKA AMERIKANA, 2 - ALIKA
Ny sary amerikana mpihetraketraka alika amerikana, 2
Bully Amerikanina olon-dehibe, sary natolotry ny Corleone Kennels
Lavaka mpamily amerikana
Ny American Bully dia antsoina koa indraindray hoe Bullypit na American Bully Pit. Ny anarana Bullypit dia ampiasain'ny klioba hybrid sasany ho anarana ho an'ny American Bulldog / American Pit Bull Terrier mifangaro , izay tsy mitovy amin'ny karazana American Bully.
Jaws II the American Bully, 17 volana, naka hatory kely teo amin'ny seza— 'Izy no zazakely lehibe indrindra hatramin'izay.'
Mia the American Bully amin'ny 8 1/2 volana milanja 67 pounds - novolavolain'ny Dazzling Bullies Kennels
Biggie ilay Amerikanina Mpanakorontana nateraky ny Dazzling Bullies Kennels
CH. Purple Nova the blue-nose American Bully amin'ny 2 taona
Zeus the American Blue-orona manga eo amin'ny 3 taona
alika kely bulldog amerikana mainty sy fotsy
Caine Loks ilay lavaka mpampijaly amerikana amin'ny taona 1
CH Casper's TI Ilay Mpanjaka Mpanafika Amerikanina tamin'ny 2 taona— 'TI no Diamond Dogs Kennels Tompondakan'ny ABKC voalohany (Pocket Class) ary ohatra tsara amin'ny amerikana amerikana Bully stud.'
Lil Kailo, ilay mpanao bully amerikana, an'ny BHK, 5 volana— 'Kimbo dia Standard American / XL Amerikana Bully 5 volana avy amin'ny Black Hammer Kennels any Mexico City. Alika mpanaiky voajanahary izy. Tiany ny any ivelany ary milalao miaraka amin'ny zokiny lahy Boxer fotsy antsoina hoe 'Lennon' ... eny toa ny Beatle !. Ny hetsika tiany indrindra dia ny fanenjehana ireo androngo izay milentika ao anaty patio, na dia tsy dia mahatratra azy ireo aza izy. '
Quetzalli, Princess of the American Bully, teraka tamin'ny 5 volana— 'Quetzalli dia rahavavavin'i Lil Kimbo an'ny BHK. Olona matanjaka maoderina / kilasika amerikanina mpanao asa tanana 5 volana mahery izy. Tovovavy kely matoky tena izy. Fiainana sy fitiavana milalao miaraka amin'ireo rahalahiny izy. Tiany hilentika amin'ny masoandro. Tsy izy no zaza lehibe indrindra tamin'ny fako, fa izay tsy ampy amin'ny habeny no amboariny amin'ny toetra. '
mpiady boxer alemanina mpiandry mix
'Destiny dia Amerikana Mpanakorontana hafa avy amin'ny On The Edge Kennel. Izy ihany koa no tohodranon'i Dream, aseho etsy ambony. Ireo vehivavy roa vavy dia fomba mahazatra American Bullies. ' Sary natolotr'i Ashley Martin, On The Edge Kennel
Diamondbacks Volomparasy Casanova ilay Amerikana Mpanakorontana amin'ny 2 taona— 'Nova no Diamond Dogs Kennels Tompondakan'ny ABKC faharoa. Izy dia mifanaraka amin'ny Standard Standard an'ny karazana mpampijaly amerikana. Ny lokony dia faritana ho tri volomparasy, antsoina koa hoe champagne tri na lilac tri. Alika tsara fomba izy, manana toetra milalao, mora mandeha. Tena tiany ny ankizy. '
DDKs Armanis mitsiriritra ny alika kely Amerikanina Bully amin'ny 8 herinandro— 'Ny fialonana dia alika kely amerikana miloko manga Tri. Novokarina tao amin'ny Diamond Dogs Kennels izy ary manantena ny hampiseho ny ABKC amin'ny 2014, tantanan'ny tompony Andrea 'Mizz Bully' Clouse. '
Chopper Tompondakan'i Ultimate Edge, ilay American Bully, 2 taona
Nahazo Tompondaka tsara indrindra tamin'ny Ultimate Bully Independence II ny Ultimate Edge's Chopper
Chopper the American Bully amin'ny 2 taona— 'Tompondaka tamin'ny faha-15 taonany izy. Manana fetisy tongotra izy ka antsoinay hoe Kinky. izy tia rano . Ny fako nomeny koa dia nomena sakafo tavoahangy nanomboka tamin'ny 4 andro. Nanana 11 izahay ary afaka nihazona ny velona rehetra na dia nilaza aza ny mpitsabo biby sy ny kennels hafa fa mety ho very ny ankamaroan'izy ireo. Zanakao hafa fotsiny izy! '
Chopper the American Bully amin'ny 2 taona
Chopper the American Bully amin'ny 2 taona miaraka amin'ny tompony
'Izaho dia tompon'ny BullyDogKennels ary ity no Bully amerikaniko antsoina hoe Lil Nikki G. Leblue. 100% andalana Gotti izy. Nentiko avy tao amin'ny Imperial Kennels Kamp any San Diego izy. Ny vadiny dia IkWhiteout (RIP Kryptonight son) ary ny tohodranony dia Gotti line Nikki Gotti, izay zanakavavin'i Leblue (moo, rahavavinao moo) ary 21 Blackjack. 6 volana izy tamin'ny fotoana nalaina sary. Alika tsara notezaina niaraka tamin'ny alika mpiompy hafa ary niaraka tamin'ny ankizy kely tao an-trano. Tiany daholo izy rehetra. Manana toetra tsara izy ary tia ankizy. '
'This is BigBully Kennel's Toga (10 herinandro), (American Bully).'
'Ny nofy dia tsy teo amin'ny voalohany fako amerikanina mpampijaly izy dia style American Bully mahazatra, aseho eto amin'ny 1 taona. ' Sary natolotr'i Ashley Martin, On The Edge Kennel
mpiandry ondry aostraliana kely sy mainty
Skylar, Amerikana Mpanakorontana, sary natolotry ny Down South Smokin 'Kennels
Tombo-kofehy volontany Tricolor American Bully antsoina hoe Mpanjakavavy, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Kennels Down South Smokin '
Ankizy 11-taona Razor's Edge American Bully, antsoina hoe Maya, ity 11 taona ity. Ny tompona dia Reggaton Singer Oz avy any Puerto Rico. Ny stud dia Whopper, aseho etsy ambany.
Whopper the American Bully, stud of Maya the puppy etsy ambony. Razor's Edge American Bully, tompona Reggaton Singer Oz avy any Puerto Rico.
Jereo ohatra ohatran'ny mpampijaly amerikana misimisy
Fampahalalana amerikanina mpampijaly
Sary mpampijaly amerikana 1
Sary mpampijaly amerikana 2
Lisitry ny rà mandriaka American Pitbull sy American Bully
Fampahalalana Amerikanina Pit Bull Terrier
Ny fahamarinana ao ambadiky ny Pit Bull Terrier
Lisitry ny ra amerikana pit Bull sy American Bully samihafa
Alika Pit Bull: Sarivongana Vintage azo angonina
Euthanasia mandatory amin'ny Teritery Pit Bull amerikana
alika omby aostraliana afangaro corgi
Lab terrier lab mifangaro alika kely
Fikambanan'ireo mpiompy curvava amerikana
fohy volo Bruxelles griffon alika kely
dia Orb hala tenona misy poizina ny alika
terrefana Andrefana afovoany mifangaro amin'ny yorkie